मोबाइलबाट ढोका खुल्ने ठमेलको पाँचतारे होटल ...
ठमेलले आफूलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित गराइसकेको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन नेपालीहरूले रोज्ने पहिलो स्थान पनि ठमेल नै हो । ठमेलले नै नेपालीलाई विदेशको रात्रिजीवनबारे परिचित गराएको छ ।
पर्यटकीय हब भनेर चिनिने ठमेलमा स्तरीय पर्यटकका लागि पाँचतारे होटलको अभाव खड्किएको अनुभव नेपालीहरूले गरिरहेका थिए । वरपरका क्षेत्रमा भेटिएपनि ठमेलमै चाहिँ पाँचतारे होटल थिएनन् । त्यो अभावलाई पूर्ति गर्दैछ, भर्खरै सञ्चालनमा आएको अलफ्ट काठमाडौंले ।
गत जुलाई १७ देखि आंशिक सञ्चालनमा आएको होटल यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पूर्ण सञ्चालनमा आइसक्नेछ ।
औपचारिक उद्घाटन नहुँदै होटल भने खचाखच भरिन थालेको देखिन्छ । नोभेम्बर महिनामा होटलको अकुपेन्सी दर ८७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अमेरिकी होटल कम्पनी म्यारियटको भगिनी संस्थाको रूपमा अलफ्ट विश्वविख्यात होटल चेन हो ।
ठमेलको व्यस्त भीडभाडबाट होटलमा पस्दा र होटलको लबीमा पुग्दा वेग्लै आनन्द अनुभव हुन्छ ।
विभिन्न विशेषता सहितका १६७ कोठा
आधुनिक भवन र सुविधासहित सञ्चालनमा आएको अलफ्ट होटलमा विभिन्न विशेषता सहितका कोठाहरू छन् । होटलमा १ सय ३ वटा लफ्ट किङ, ४९ वटा लफ्ट ट्विन रूम, ७ वटा सेभी सुइट, ६ वटा ब्रेजी सुइट र २ वटा एक्सेसेबल रूम छन् । बजारको माग अनुसार पीक सीजनमा यसको मूल्य बढ्छ भने सामान्य अवस्थामा घट्छ ।
होटलको लिफ्टदेखि रूमसम्म सबै अत्याधुनिक छन् । मोबाइल कीबाटै होटलका रूमका ढोका खुल्छन् । यसका लागि मोबाइलमा अलफ्टको एप डाउलोड भएको र सदस्यता लिएको हुनुपर्छ ।
‘हरेक कोठामा उज्यालो छिर्छ र सबै कोठाबाट काठमाडौंको कुनै न कुनै भ्यू (रमणीय दृश्य) देख्न सकिन्छ, यो हाम्रो विशेषता हो,’ मार्केटिङ एक्जेक्युटिभ खाण्डो गुरुङले भनिन् ।
पाँचतारेमा नेपाली परिकार
अलफ्टले आफ्ना पाहुनाका लागि नेपाली मौलिक परिकारको पहिचान गराउन हप्ताको निश्चित बार तोकेर ब्रेकफास्टमा सेलरोटी र बारा राख्न थालेको छ ।
‘भविष्यमा हामी अरू पनि नेपाली परिकारलाई समावेश गर्ने योजनामा छौं, त्यसका लागि खानाको परिकारको छनोट गरिरहेका छौं,’ होटलकी मार्केटिङ एक्जेक्युटिभ लक्ष्मी बस्यालले लोकान्तरसँग भनिन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा नेपाली खाना मेनुमा समावेश हुन थालेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि आयोजना गरिएको रात्रिभोजमा पनि ममदेखि बारासम्मका परिकार समावेश गरिएका थिए । विदेशी पर्यटकले बारा र सेलरोटी मनपराएको होटलका कर्मचारीले बताए ।
अलफ्टले हालै मात्र नेपालमा कश्मीरी फूड फेस्टिवलको आयोजना गर्‍यो । कश्मीरी खानाको स्वाद चाख्नको लागि नेपाली र भारतीय नागरिकको घुइँचो लाग्यो । कश्मीरी फूड फेस्टिवलका लागि सेफ सञ्जय राइना नेपाल आएका थिए ।
होटलले दाल, भात, तरकारी सहितको नेपाली थाली पनि परिकारमा राखेको छ । पाँचतारे होटलमा खाना खान आउने नेपाली ग्राहकका लागि लक्षित गरेर नेपाली थाली राखिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
होटलमा ब्रेकफास्टको १५ सय रुपैयाँ प्लस भ्याट र सर्भिस चार्ज छ भने लन्च या डिनरको मूल्य भ्याट र सेवा शुल्क बाहेक २२ सय रुपैयाँ छ ।
सम्भवतः नेपालकै भव्य र सुविधायुक्त कन्फरेन्स हल, छतमा स्वीमिङ पूल
गोष्ठी, सेमिनार, विवाह, व्रतवन्ध वा यस्तै सामाजिक कामका लागि होटलमा आधुनिक र सुविधायुक्त सेमिनार हलको व्यवस्था गरिएको छ । संकलन नाम दिइएको हलमा एकैपटक ५ सय ५० जनालाई रिसेप्सन पार्टी आयोजना गर्न सकिने होटलको भनाइ छ । साना मीटिङका लागि ट्याक्टिक नाम गरेका दुईवटा हल छन् ।
डेलाइट आउने सेमिनार हल कार्यक्रम आयोजकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।
होटलको १४ औं तल्ला अर्थात् छतमा पौडीपोखरी छ । जाडो मौसममा तातो पानी र गर्मी मौसममा चिसो पानीमा पौडी खेल्न सकिने सुविधा छ । पौडीपोखरीको साइडमा अकुरा बार छ, जहाँ बसेर आराम गर्न सकिन्छ ।
अन्य पाँचतारे होटल भन्दा अलफ्ट कसरी फरक छ ? मार्केटिङ एक्जक्युटिभ बस्याल भन्छिन्– ‘अलफ्ट एउटा म्यारियट इन्टरनेसनल ब्रान्ड भयो, पहिलो त यसको नामै काफी छ । अन्तर्राष्ट्रिय होटल भन्दाबित्तिकै मैले यहाँ आएर राम्रो सर्भिस पाउँछु र सुरक्षित रूपमा बस्न सक्छु भनी ग्राहकलाई विश्वास हुन्छ । ठमेल जस्तो लोकेसनमा कुनै पनि इन्टरनेसनल चेन खोल्नु भनेको ठूलो कुरा पनि हो नि ।’
खानाको परिकार पनि अलफ्टको आकर्षक भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग अनुभवी एक्जेक्युटिभ सेफ शैलेन्द्र सिंह र एक्जेक्युटिभ सु सेफ राजीव श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । ग्राहकहरूले यहाँको खानाको प्रशंसा गर्छन्,’ गुरुङले भनिन् । अलफ्टमा आउने ग्राहकले होटल छिरिसकेपछि सजिलो महसूस गर्ने उनको अनुभव छ ।
अलफ्ट डेस्टिनेसनमा नेपालको परिचय
अलफ्टले आसन्न नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को प्रचारका लागि अलफ्ट होटलको विश्वव्यापी सञ्जालमा नेपालको परिचय देखाउने सामग्री प्रसारण गरेको छ ।
‘हाम्रो होटलको विज्ञापन नभएर नेपालको प्रचार भएको छ,’ बस्यालले भनिन् ।
प्रदेश २ मा कोरोनाको तथ्यांक : ७३ जनाको स्वाब पर...
कोरोनाबारे चीनबाट नेपालले के सिक्ने ? यस्तो छ प्रा...
बिरामी फर्काउने निजी अस्पताल बन्दसम्म गर्ने गण्डकी मन्...